NeoDen မှ အားလပ်ရက်သတိပေးချက်
NeoDen ① 2010 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်း 200+၊ 8000+ Sq.m.စက်ရုံ ② NeoDen ထုတ်ကုန်များ- စမတ်စီးရီး PNP စက်၊ NeoDen K1830၊ NeoDen4၊ NeoDen3V၊ NeoDen7၊ NeoDen6၊ TM220A၊ TM240A၊ TM245P၊ reflow မီးဖို IN6၊ IN12၊ Solder paste ပရင်တာ FP304036 ဖောက်သည်များ
အဆင့် 1: ဘုတ်မျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းပါ။ဘုတ်မျက်နှာပြင်ကို ဆီနှင့်ဖုန်မှုန့်များ ကင်းစင်အောင်ထားပါ (အဓိကအားဖြင့် reflow oven တွင်ကျန်ခဲ့သော ဂဟေဆော်မှ အရည်များ)။၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် အက်စစ်ဓာတ်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ဘုတ်ပြားနှင့် သုံးလွှာခံဆေး၏ ကပ်ငြိမှုကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။အဆင့် 2: အခြောက်...
Manual soldering သည် SMT processing လိုင်းများတွင် အသုံးအများဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။သို့သော် ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အချို့သောဘေးကင်းရေးအစီအမံများကို ဂရုပြုသင့်သည်။ဝန်ထမ်းများသည် အောက်ပါအချက်များကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်- 1. ဂဟေသံခေါင်းမှ 20 ~ 30cm အကွာအဝေးကြောင့်...
BGA ဂဟေဘူတာ နိဒါန်း BGA ဂဟေဆက်စခန်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် BGA rework station ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် ဂဟေပြဿနာများရှိသော BGA ချစ်ပ်များနှင့် BGA ချစ်ပ်အသစ်များကို အစားထိုးရန်လိုအပ်သည့်အခါတွင် အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။BGA ချစ်ပ်ဂဟေဆက်ခြင်း၏အပူချိန်လိုအပ်ချက်သည်အတော်လေးမြင့်မားသောကြောင့် ...
Surface mount capacitors များသည် အမျိုးအစားပေါင်း ရာနှင့်ချီရှိနိုင်သော ပုံသဏ္ဍာန်၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့် အသုံးပြုမှုအလိုက် အမျိုးအစားခွဲကာ မျိုးကွဲများစွာနှင့် စီးရီးများအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။၎င်းတို့ကို ပတ်လမ်းကိုယ်စားပြုသင်္ကေတအဖြစ် C ဖြင့် chip capacitors၊ chip capacitors ဟုခေါ်သည်။SMT SMD လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင် 80% ခန့်...
ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အရန်ပစ္စည်းများ၏ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍကို ကျွန်ုပ်တို့ မေ့မရနိုင်ပါ။လောလောဆယ်တွင် အသုံးအများဆုံး ခဲမဖြူဂဟေနှင့် ခဲ-မပါသော ဂဟေဆော်သည်။အကျော်ကြားဆုံးမှာ 63Sn-37Pb eutectic သံဖြူခဲဂဟေ၊
Mini Pick And Place စနစ် Pcb ကိုရွေးချယ်ပြီးနေရာချပါ။ Smt ရွေးပြီး စက်သေးသေးလေး ထားလိုက်ပါ။ စက်ရုပ်ကို အလိုအလျောက်ရွေးချယ်ပြီး နေရာချပါ။ Pcb စက်ရုပ်ကို ရွေးပြီး နေရာချပါ။ သေးငယ်သော Pick And Place စက် ထုတ်ကုန်အားလုံး